स्मार्ट मोबाइल फोनका लागि बिर्तामोडमा रुप मोबाइल घर - खबरमञ्च खबरमञ्च
१५ साउन, at 3:16 PM
By खबर मञ्च / July 30, 2017 / Comments Off on स्मार्ट मोबाइल फोनका लागि बिर्तामोडमा रुप मोबाइल घर
बिर्तामोड । मोबाइलका स्मार्ट ग्राहकलाई लक्षित गरी झापाको बिर्तामोडमा रुप मोबाइल घरको शनिबार भव्य शुभारम्भ भएको छ । स्मार्ट काउन्टरसहितको सोरुममा विश्वमा चर्चित ब्रान्डका मोबाइलको बिक्री गरिने सञ्चालक खगेन्द्र नेपालले बताए ।
बिर्तामोडको हनुमान सेन्ट्रलको दोस्रो तलामा रहेको रुप मोबाइल घरले मल्टी ब्रान्ड स्मार्ट सोरुम सञ्चालनमा ल्याएर पूर्वका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सहजता प्रदान गरेको नेपालले जानकारी दिए ।
शनिबार एक कार्यक्रमबीच सञ्चालकका छोरा रुप नेपालको हातबाट केक काटेर सोरुमको शुभारम्भ गरिएको थियो । कार्यक्रममा शिखर साकोसका सचिव हिमाल प्रसाईं, मोबाइल घरकी सञ्चालक सम्झना नेपाल, सञ्चारकर्मी उमाकान्त खनाल, हिमाल खरेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
औपचारिक उद्घाटनअघि नै मोबाइलको बिक्री सुरु गरेको घरले विश्व चर्चित ब्रान्डहरु जियोनी, ओप्पो, सामसङ, हुवाईलगायत कम्पनीका विभिन्न मोडलका मोबाइलहरु सोरुममा उपलब्ध रहेका छन् । मोबाइलका एसोसेरिज समेत पाइने उक्त सोरुम पूर्वाञ्चलमै एक मात्र स्मार्ट र आधुनिक रहेको बताइएको छ ।
पूर्वको मोबाइल बजारमा फरक विशेषता बोकेको काउन्टर रहेकाले पनि मोबाइल प्रयोगकर्ता आकर्षित हुने नेपालको विश्वास छ । ‘नेपालका ६० प्रतिशत मानिसले स्मार्ट फोन बोक्दैनन्’, उनले भने, ‘ती ग्राहकलाई लक्षित गरी रुप मोबाइल घर खोलिएको हो ।’ नेपालले सञ्चालन गरेको मनकामना सप्लायर्स जियोनी मोबाइलको मेची अञ्चल बिक्रेता हो।
Published:2years ago on July 30, 2017
Last Modified: July 30, 2017 @ 3:16 pm
Filed Under: अर्थतन्त्र, कर्पाेरेट
विर्तामोड उ. वा. संघमा मित्तलको नेतृत्वमा संयुक्त व्यवसायिक प्यानलको उम्मेद्वारी
ठेकेदार बेपत्ताः चारआली – चन्द्रगढी सडक निर्माण अलपत्र
कर्मचारी समायाेजनले पुनर्निर्माणमा असर पर्याे: प्राधिकरण